Dhirta dhaadheer | February 2020
Ugu Weyn Ee Dhirta dhaadheer
Qeexida iyo sawirada noocyada cawska
Cawska ciriiriga ah ayaa si siman u eegaya muuqaalka muuqaalka muuqaalka. Xilliga kuleylka, waxay abuurayaan wax ka duwan qoraallada ubaxyada, iyo xilliga qaboobaha waxay ka takhalusayaan beerta caajisnimo. Waxyaabaha kala duwan ee qurxinta ee duurka ee waraaqo-dhaliyeyaashu waxay qancinayaan ninkii beerta ka shaqaynayay. Qofkii raadinaya geedka qaab shumac ah, iyo mid raba inuu arko geed dhirta cufan ama dhirta gaaban ee ku jira xuddunkiisa ayaa isku arki doona geedka cagaarka ah.
Noocyada Caadiga Ah ee Cagaaraha
Caadi ahaan ciriiriyadayada cagaaran ayaa la mid ah cirbadaha cagaaran ee jilicsan, waxay u egtahay xeedho, oo ah goobta dhalashada loogu yeedho waqooyiga Ameerika, jasiiradda Taiwan iyo Japan. Wadar ahaan, lix nooc oo waaweyn oo geedkan ah ayaa loo yaqaanaa, mid kasta oo ka mid ah noocyo badan oo badan oo loo yaqaan 'polygons'. Dhammaan dhirta caynkan oo kale ah waxaa lagu gartaa taajkii pyramidal iyo jilicsan-bunni ah.
Firax: noocyada ugu caansan iyo noocyada
Firfircooni waa dhuxul aan caadi ahayn oo leh taako xiran. Dusha sare ee firirku wuxuu ka bilowdaa asliga ah. In geedaha qaangaarka ah, sare ee taajka ayaa lagu soo koobay ama la gooyey. Midabka periderm waa cawl, ma ahan mid xayawaanka ugu badan ee firirka. Alaarmiga geedaha qaangaarka ah wuxuu noqonayaa mid dhumuc ah oo dillaacaya waqti dambe.
Suufiyaanka Serbian: sida loo koro xaaladaada
Mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee qurxinta xagaaga xagaaga waa xabbad serif ah. Waxay soo jiidataa iibsadayaasha ma aha oo kaliya astaamaha dibedda, laakiin sidoo kale waxay u adkeysiga, iyo sidoo kale sahlan daryeelka. Laakiin miyay kuwan uugu filan si ay uga baxaan dhammaan musharrixiinta kale? Sharax kooban oo ku saabsan spruce Serbiya, oo magaciisa cilmi ahaan loo yaqaan picea omorika, wuxuu matalaa qoyska Pine.
Geedka kirismaska: qurxinta quruxda badan leh gacmahaaga
Jadwalku wuxuu si kalsooni leh u soo celiyaa waraaqo la calaamadeeyay "December", taas oo macnaheedu yahay in Sanadka Cusub uu sii dhawaanayo. Safarka farxad leh, safarrada dukaamada, qorshayaasha iyo riyada - waxaan si tartiib ah ugu biiraynaa maaratoonkan. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa, dabcan, geedkii kirismaska, iyada oo aan loo fasaxin fasaxan aan la qiyaasi karin. Waxaan baraneynaa sida loo qurxiyo geedkan si markaa sannadka soo socda uu xasuusiyo dhacdo dhalaalaya.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta dhaadheer 2020